Iinzuzo Ukukhetha Bamboo Ingubo
Ngaba wakha weva ingubo loqalo? Kuyinto yimveliso elihle elibonelela amaqashiso wentuthuzelo. Ezi iingubo zenziwa ultra soft ifayibha bamboo eyenza kube mnandi kakhulu ukuba snuggle kulo.
Bamboo ingubo ikhethwa ngabaninzi ngenxa ukuthamba yayo esinika intuthuzelo lekhamera. Uqalo yaziwa kwiipropati yayo antibacterial. Iqulethe bamboo Kun, nto leyo arhente yendalo antibacterial. Kuye ubuchule ukubulala iintsholongwane kunye izinambuzane eziyingozi izoyikiso kakhulu kwimpilo. Kwakhona manzi bugs, ukungunda, kunye nomzimba. Oku kwenza i ingubo a ukhetho esempilweni kwaye bekhululekile.
Uqalo ifayibha na imveliso engenye enkulu ezenziwe ngabantu iifayibha ezifana nenayiloni kunye ipholiyesta. Eli laphu i nomoya kwaye wenze iingubo ezithambileyo kakhulu. Kuyinto izifunxi kakhulu kakhulu. umgangatho wayo nomoya ukhuthaza komphunga umbilo kunye namavumba umzimba ulifunxa. Olu phawu lwenza kube ukhetho ithandwa oomama, abafuna ukugcina iintsana zabo ifudumele.
Bamboo ingubo iza imibala enomtsalane kwaye abe nobukhulu obahlukeneyo. Ungakhetha kwezahlukeneyo imibala elivuthayo kunye noyilo. zokulala ubungakanani Small ziyafumaneka ukugcina usana lwakho Ukufudumala ifudumele ngoxa wena uhamba. zokulala omdala omkhulu kwabo, abo bafuna intuthuzelo engaphezulu tofo. Ultra soft, ingubo ekhululekile ezilungele ukusetyenziswa unyaka wonke. Le ingubo kulula ukugcina kwaye zohlanjwa ngamanzi ashushu kulo matshini.
It is a izityalo ezikhula ngokwendalo, waphawula ukuba ingayethuba elide kangakanani na. Ukuba uthe wagawulwa, oko kube lula indawo. Yeyona olukhulayo isityalo ngokukhawuleza ehlabathini. Akunyanzelekanga ukuba zinambuzane ukuze zikhule. Uqalo unika 40% ioksijini extra kwaye lisusa imichiza eyingozi emoyeni. Ezi mpawu zenza bamboo yokulala kukho olukhulu kokusingqongileyo lobuhlobo.
Uqalo ingubo ilungele labo, athe avelana kwimicu zokwenziwa. osemqoka wayo nomoya kwenza ezilungele ukusetyenziswa ehlotyeni ebusika. Loo nto ikwenza uzive lifudumele ebusika kwaye igcina ukuba epholile ehlotyeni ashushu.
Le ifayibha unawo amandla kunye bhetyebhetye bomqhaphu. Ukongeza, ukuba unemisebenzi ezinye iimpawu ezimangalisayo ezifana amandla anti yintsholongwane, izifunxi ophezulu, silky agudileyo kwaye ekhululekile yaye yebug kwaye allergen repellence umthamo. I ingubo eyenziwe uqalo edume asetyenziswe iiholide kunye neehotele Noluyolo ukuba unqwenela ukunika intuthuzelo enkulu iindwendwe zabo.
Ixabiso ngeengubo eyenziwe ngoqalo bahluka ubukhulu. Nangona ezi iingubo zibiza ngaphezu iingubo eziqhelekileyo, banikela intuthuzelo ekugqibeleni.
ixesha Post: Jul-31-2018
ukujongana North Side of Xiaoyi River, nobucukubhede Industrial Zone, Hongrun Street, Gaoyang County, Baoding, Hebei, China (wase-)